Ity no fanamby vaovao amin'ny taom-baovao Google Fit | Androidsis
Ny lazan'ny Google Fit dia nitombo rehefa nandeha ny fotoana. Nanjary iray amin'ireo fampiharana ilaina ho an'ny orinasa izy io mampahafantatra tsy tapaka ny fanatsarana. Amin'izao fotoana izao, amin'ny fotoana fampiasa amin'ireo daty ireo, ny fampiharana mamela anay hanana fanamby amin'ny taona vaovao. Araka ny fantatrao, ny Krismasy dia fotoana iray mahatonga ny olona ho matavy. Ny fampiharana dia mikasa ny hanolotra fanamby hamoahana ireo kilao ireo.
Google Fit maniry ny hampiasan'ny mpampiasa fampihetseham-batana amin'ny Janoary. Zavatra tokony hataon'izy ireo isan'andro, hahazoana endrika, ankoatry ny fahaverezana ny kilao fanampiny azony nandritra ny fetin'ny krismasy. Fanamby izay hetsika lehibe voalohany amin'ny app Google.
Ity fanamby ao amin'ny Google Fit ity dia natomboka ho an'ny karazan'olona marobe. Etsy andaniny, mieritreritra ireo olona nametraka tanjona izahay, anisan'ny fanapahan-kevitry ny Taom-baovao, ny hihena na hitondra fomba fiaina salama. Ity dia zavatra iray izay manahirana matetika amin'ny voalohany, ka izany no mahatonga ny olona maro mandao azy. Noho izany, ny fampiharana dia mikendry ny hanampy anao hanamora kokoa azy ary afaka hamorona fomba mahazatra, mba hahatratraranao izany tanjona izany.
Etsy ankilany, ity fanamby ao amin'ny Google Fit ity dia natomboka ihany koa ho an'ireo olona izay te hampihena tsotra izao ireo fihoaram-pefy ireo ny sakafo Krismasy. Noho izany dia hanampy anao hihena izy io ary hanana gadona fiainana tsara kokoa. Ity fanamby ity dia mety ilaina amin'ny karazan'olona roa, araka ny hitanao.
Raha te handray anjara amin'ilay fanamby, ny sisa ataonao dia ny misoratra anarana amin'ny Google Fit. Amin'ny fotoana anaovantsika an'io dia hanomboka hanisa isa ireo hetsi-panentanana ny fampiharana. Isaky ny minitra ataontsika dia mahazo teboka iray isika. Teboka roa amin'ny tranga mavitrika. Ny tanjona dia mahazo isa mavitrika 150 isan-kerinandro. Io no ambany indrindra natolotry ny World Health Organization.
Tsy misy fisalasalana fa mitady izany fanamby izany manatsara ny lazan'ny fampiharana eo amin'ireo mpampiasa amin'ny Android. Google dia nanao fanatsarana betsaka momba azy, saingy fampiharana izay mbola mila fakan-tsary ihany. Ka tsy maintsy ho hitantsika ny fivoaran'ny evolisiona ao anatin'ny volana ho avy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Google Fit dia mandefa ny fanambin'ny Taom-baovao
Ahoana ny fomba fanesorana virus amin'ny telefaona Android